Window7ကို Software မသုံးပဲ Partition ပိုင်းကြည့်ရအောင်နော် - Zomi Computer and Internet Association
Home / HARDWARE / Window7ကို Software မသုံးပဲ Partition ပိုင်းကြည့်ရအောင်နော်
Window7ကို Software မသုံးပဲ Partition ပိုင်းကြည့်ရအောင်နော်
Taang Sianpu February 08, 2011 HARDWARE
သိပြီးသားဆရာများအတွက်တော့် sorry ပါနော်
1. Desktop က My Computer >> right click နှိပ်ပြီး Manage ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
2. Computer Management box ပေါ်လာပါမယ်။
3. Storage >> Disk Management ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
4. မိမိပွားယူမယ့်အပိုင်းကိုခွဲဖို့ မူလရှိသည့် HDD ကိုရွေးပေးပါ။ (တစ်ပိုင်းတည်းဆို C:/ ကိုရွေးပေးပါ) တစ်ပိုင်းတည်းကို ပြန်ခွဲတာပဲပြောပြပါ့မယ် . အတူတူပါပဲ ကျွန်တော်က C:/ တစ်ပိုင်းတည်းကို နှစ်ပိုင်းပြန်ခွဲပြမှာပါ။
5. C:/ >> right click နှိပ်ပြီး shrink volume ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
6. Enter the amount of space to shrink in MB မှာ မိမိ ပိုင်းချင်တဲ့ပမာဏကို ထည့်ပေးရမှာပါ . (1024 MB = 1 GB)။
7. ပြီးတာနဲ့ Shrink ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
8. Partition အသစ်တစ်ခု တိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ တွေ့တဲ့ partition အသစ်ကို right click ထောက်ပြီး New Simple Volume ကိုရွေးပေးပြီး Next .... Next ဆိုပြီးတော့ ဆက်နှိပ်သွားလိုက်ပြီးတာနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ Partition အသစ်တစ်ခု ထပ်တိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။